Shuruudo ku aaddan marka aad gunno ka qaadato qasnadda shaqa la'aanta
Marka aad gunno ka qaadato qasnada shaqa la'aanta, waxaad u baahantahay, inaad si firfircoon shaqo u raadsato iyo inaad warbixin-hawleed u gudbiso Xafiiska shaqada bil walba. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa waxa aad u baahantahay in aad sameyso si aanad khatar ugu gelin in laguu digo ama aad gunno la'aan noqoto hal maalin ama in ka badan.
Maxaan u baahanahay inaan sameeyo?
Si aanad khatar ugu gelin in aad gunno la'aan noqoto hal maalin ama in ka badan waxaad u baahantahay inaad ka adkaato shaqo raadintaada, aadna raacdo qorshaha iyo heshiisyada aad nala leedahay.
Waxay taasi ka dhigantahay inaad u baahantahay
inaad bishiiba dalbato shaqooyin badan oo habboon, tusaale ahaan shaqooyinka la xayeesiiyay iyo shaqooyinka uu Xafiiska shaqadu kugula taliyay, ama aad shaqabixiyayaal u gudbiso CV iyo codsiyo shaqo.
inaad codsato shaqooyinka aan kaa dalbannay inaad codsato
in aad bil walba inta u dhaxaysa 1-da ilaa iyo 14-ka noo soo gudbiso warbixinta dhaqdhaqaaqa halkaas oo aad buuxineysid dhammaan shaqooyinkii aad codsatay iyo waxyaabihii kale ee aad qabatay.
inaad si wadajir ah noola sameyso qorshe-hawleed ku aaddan sida aad shaqo ku heli kartid
in aad ka qayb qaadato kulammada ama nala soo xiriirto annaga iyo qandaraaslayaasheenna haddii aad leedahay ballan, taleefankana qabato marka aan ku heshiinno inaan ku soo wacno.
Si aadna u dheereyn shaqo la'aantaada, khatarna ugu gelin inaad maalmo badan gunno la’aan noqoto, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad oggolaato
shaqadii laguu soo bandhigo
wareysiyada shaqo, aadna aad ugu dadaasho sidii aad ku heli lahayd shaqo
taageerada dheeriga ah ee aan ku siineyno iyadoo aan barnaamijyo adeegsanayo
Waxaa laguu arki karaa inaad sababtay shaqo la'aantaada, waxaadna khatar ugu jirtaa inaad dhowr maalmood gunno la'aan noqoto haddii aad
In aad adigu iskaa u doorato in aad barnaamij ama shaqo ka tagto sabab la'aan
u dhaqanto si keeneysa in aan barnaamijkaaga joojinno
sabab u noqoto in shaqa bixiyahaagu uu joojiyo shaqadaada
Maxaa dhacaya haddii aanan samayn, waxa ay tahay in aan sameeyo?
Hawlaha Xafiiska shaqada waxaa ka mid ah wargelinta qasnaddaada shaqa la'aanta haddii ay dhacaan wax saameyn kara gunnadaada. Waxaan farriin u direynaa qasnaddaada shaqa la'aanta haddii aadan shaqa raadintaada si fiican u gudan, ama dheereyso ama aad sababto shaqa la'aantaada. Haddii ay qasnaddaada shaqa la'aantu bilowdo baaritaan, way kula soo xiriiriyaan, waxaadna heli doontaa fursad aad ku sharraxdo waxa dhacay, ka hor inta aanay go'aan ka gaarin gunnada.
Waxay qasnaddaada shaqa la'aantu go’aansan kartaa in lagu ganaaxo ama lagaa joojiyo gunnada hal maalin ama in ka badan. Waxay sidoo kale go'aansan karaan in gunnadaada aan la taaban, tusaale ahaan haddii ay u arkaan inaad haysato sabab la aqbali karo.
Tani waxay dhacaysaa haddii aadan shaqo raadintaada si fiican uga soo bixin
Marka ugu horreeya: waxaad heleysaa digniin.
Marka labaad: 1 maalin oo gunno la'aan ah.
Marka saddexaad: 5 maalin oo gunno la’aan ah.
Marka afaraad: 10 maalmood oo gunno la’aan ah.
Marka shanaad: xaqa gunnadu wuu dhamaanayaa ilaa aad ka buuxinayso shuruudo shaqo oo cusub.
Tani waxay dhacaysaa haddii aad kordhiso shaqo la'aantaada
Marka ugu horreeya: 5 maalin oo gunno la’aan ah.
Marka labaad: 10 maalmood oo gunno la’aan ah.
Marka saddexaad: 45 maalin oo gunno la’aan ah.
Marka afaraad: 45 maalin oo gunno la’aan ah.
Tani waxay dhacaysaa haddii aad keento shaqa la’aantaada
Marka ugu horreeya: 45 maalin oo gunno la’aan ah.
Marka labaad: 45 maalin oo gunno la’aan ah.
Marka saddexaad: Xaqa gunnadu wuu joogsanayaa ilaa aad ka buuxiso shuruudo shaqo oo cusub.
Haddii aan ogaanno wax saamayn kara fursada-haaga ku aaddan shaqa raadinta iyo shaqo qaadashada
Haddii aan ogaanno in ay jiraan wax kaa xannibi kara inaad codsato iyo inaad qaadato shaqo, waxaan ku khasban-nahay inaan ku wargelinaa qasnaddaada shaqa la'aanta. Waxay tusaale ahaan waxaas noqon karaan inaad wax baraneyso, jirrantahay, daryeesho carruur bukta, shirkad leedahay ama aad waddanka dibaddiisa jirtid. Haddii ay khasnadda shaqa la'aantu billawdo baaritaan, way kula soo xiriiri doonaan ka hor inta aysan gaarin go'aan saameynaya gunnadaada.
Sidoo kale waan u sheegeynaa qasnaddaada shaqa la'aanta haddii aad nagu wargaliso in aad shaqo billawday oo aanad baagamuuddo sii ahayn ama sabab kale awgeed aanad shaqa doon u ahayn. Haddii markaas ka dib aad rabto inaad mar kale codsato shaqo iyo gunno, waxaad u baahantahay inaad na soo wacdo maalinta ugu horreysa ee shaqa la'aantaada. Haddii aad iska saartay Xafiiska shaqada, waxaad u baahan tahay inaad mar kale isku qortid.
Su'aalo iyo jawaabo caadi ah
Imisa shaqo ayey tahay in aan raadsado?
Qorshe hawleedkaaga waxaa ku jiri kara wax loogu yeero raadinta inta u dhexeysa, tusaale ahaan 6-20. Waxay taasi tilmaameysaa inta shaqo ee ay tahay inaad codsato si aad u hesho fursad wanaagsan oo aad shaqo ku hesho sida ugu dhakhsaha badan ee suurta galka ah. Xitaa haddii aadan weli haysan qorshe hawleed ama haddii qorshe hawleedkaagu aanu lahayn ’raadinta inta u dhexeysa’, waxaad u baahantahay inaad si firfircoon u codsato shaqo.
Hubi inaad dhammaan shaqooyinka aad codsatay ku buuxiso warbixinta dhaqdhaqaaqa: shaqooyinka la xayaysiiyay, codsiyada lama filaanka ah ama shaqooyinka aanu kugu dhiirrigelinnay inaad codsato ama kuugu baaqnay. Sidoo kale ku buuxi haddii aad CV-gaaga u gudbisay shaqa bixiye. Warbixintaada dhaqdhaqaaqu aasaas muhiim ah ayey noo tahay si aanu u qiimeyn karno inaad si firfircoon shaqo u raadsato iyo in kale. Haddii uu shaqa raadsigaagu yar-yahay, waxaan ogaysiineynaa qasnaddaada shaqa la'aanta oo samayn doona qiimayn. Haddii ay u arkaan inaadan ahayn shaqa raadiye firfircoon, waxay go'aansanayaan in ay digniin ku siiyaan ama aad gunno la’aan noqoto hal maalin ama in ka badan.
Haddii aad qeyb ahaan shaqeyso ama sababo kale awgood aadan waqti buuxa shaqo la'aan ahayn, taasi wey saamayn kartaa inta shaqo ee aad u baahantahay inaad raadsato.
Ma khasabbaa inaan shaqa ka raadiyo waddanka oo dhan?
Si aad u kordhiso fursadahaaga aad degdeg shaqo ugu heli karto, waxaad u baahan kartaa inaad shaqo ka codsato xataa meel ka baxsan magaaladaada ama meel aad safar ku gaarto maalin walba. Waxay ku xirantahay meesha aad deggantahay, xirfadaha aad shaqo ka dhex raadiso iyo sida uu u eg yahay suuqa shaqadu. Haddii aysan jirin ama yaryihiin shaqooyinka habboon ee aad ka codsan karto meesha aad degantahay, waxaad u baahantahay inaad xitaa ka raadsato meelo kale oo dalka ah.
Waxaad sidoo kale u baahantahay inaad diyaar u tahay in aad aqbasho shaqo meelo kale ah oo dalka ka mida haddii shaqa bixiye uu u baahanyahay aqoontaada xirfadeed.
Maxaa loo arkaa shaqo ku habboon?
Shaqa kasta oo ay aqoontaada xirfadeedi ku habboonaan karaan, mabda' ahaan, waa habboontahay, maaha oo kaliya shaqo aad khibrad u leedahay ama waxbarasho. Haddii uu shaqa bixiye rabo inuu ku shaqaaleysiiyo oo uu u arko inaad leedahay aqoon xirfadeed oo sax ah, taasi waa shaqo habboon.
Waa inaad sidoo kale diyaar u ahaataa inaad guurto ama haddii loo baahdo toddobaadkii safarto si aad shaqo u hesho ama haddii aqoontaada xirfadeed uu shaqa bixiye uga baahanyahay meel kale oo waddanka ka mid ah.
Haddii, sababo caafimaad awgood, aadan u codsan karin ama u qaadan karin noocyo shaqo oo gaar ah, waxaad u baahantahay inaad haysato caddeyn dhakhtar oo qoraala.
La xiriir qasnaddaada shaqa la'aanta haddii lagu siiyo shaqo oo aadan hubin inay tahay shaqo habboon, tusaale ahaan iyadoo lagu saleynayo jawiga shaqada ama xaaladaha lagu shaqeynayo. Markaas waxaad ogaan doontaa inay saameyn ku yeelan karto gunnadaada haddii aad shaqada diiddo.
Waxaan dhigtaa kooras si aan u kordhiyo fursadahayga shaqo helidda. Waa maxay sababta ay khasab u tahay inaan oggolaasho ka helo qasnadda shaqo la'aanta?
Asal ahaan wuxuu xeerku qabaa inaadan waxbaran karin isla markaasna gunno ka qaadan karin qasnadda shaqa la'aanta. Waxaa jira waxyaabo qiil loo heli karo, had iyo jeerna waa qasnadda shaqa la'aanta cidda go'aan ka gaareysa inaad qaadan karto gunnadaada markaad waxbaranayso in kale. Sidaa darteed waa muhiim inaad la xiriirto qasnaddaada shaqa la'aanta inta aanad koorso ama waxbarasho bilaabin ka hor. Tani waxay khusaysaa nooc kasta oo waxbarasho ah iyadoon la eegeyn, inta wakhtiya ee aad gelineyso, iyo in la dhiganaayo maalintii, fiidkii ama sabtida iyo axadda. Haddii uu Xafiiska shaqada ogaado inaad wax baranayso oo aanu hayn xog sheegeysa in khasnadda shaqa la'aanta ay waxbarashada kuu oggolaatay, waa in aan khasnadda shaqa la'aanta u sheegnaa waxbarashada.
Haddii laguu oggolaado inaad waxbarato adigoo gunno ka qaadanaya qasnadda shaqa la'aanta, waa inaanay waxbarashadu saamayn ku yeelan shaqa raadintaada. Waa inaad sidoo kale diyaar u tahay inaad joojiso waxbarashadaada haddii aad shaqo hesho.
Waxaan helay shaqo cusub laakiin weli ma billaabin. Ma khasabbaa inaan sii wado raadinta shaqooyin kale?
Ilaa inta aad shaqa la'aan tahay oo aad gunno ka rabto qasnadda shaqa la'aanta, waa inaad sii waddaa firfircoonidaada oo shaqo raadisaa. Tani waa mid ka mid ah shuruudaha caymiska shaqa la'aanta. Waxaad markaas raadin kartaa shaqooyin ku meel gaar ah.
Haddii aad haysato heshiis shaqo cusub oo ay tahay inaad billowdo bil gudaheed, waxay taasi noqon kartaa sabab la aqbali karo oo aad ku diiddo shaqo kale ama aadan ku codsan shaqo aan kugu dhiirrigelinay inaad codsato. Wixii macluumaad ah ee dheeraad ah kala xiriir qasnaddaada shaqo la'aanta. Maskaxda ku hay inaad, saas oo ay tahay, sii waddo in aad shaqo gacantaada ku raadsato. Sidoo kale ogaysii Xafiiska shaqada in aad heshay shaqo cusub.
Koontaroolidda shaqooyinka la codsaday
Waxaan mararka qaarkood sameynaa koontarool, si aan u hubinno inaad codsatay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay warbixintaada dhaqdhaqaaqa.
Haddii aad u baahan tahay inaad xaqiijiso shaqo aad codsatay
Gunnda ka timaada qasnadda shaqa la'aanta
Marka aad shaqo la'aan tahay, waxaad fursad u heli kartaa in aad gunno ka hesho caymiska shaqa la'aanta inta aad shaqo raadsaneysid. Gunnada waxaad ka dalbanaysaa qasnaddaada shaqo la'aanta. Halkan ayaad ka akhrisan kartaa sida aad u codsaneysid, waxa loo baahanyahay si loo helo gunnada iyo inta lacag ah ee aad heli karto.
Gunno ka timaada qasnadda shaqa la'aanta